Tani waxay ahayd ol 'classic Can of Worms | Martech Zone
Isniin, April 9, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Markaad ku dhufato faallooyinkaas 30aad ee ku saabsan boostada maalin gudaheed, waad ogtahay inaad ku dhacday neerfaha!
Markii aan go’aansaday ku dhaji ku qanacsanaanta ugu dambeysay ee 37 Signal, sinaba uma aanan isku deyin inaan garaaco bogga hore ee TechMeme ama haysato Jason Fried shaqsiyan ii sheeg Intiinii in mudo ah soo jirtay waxay ogtahay inaan ahay nin fiican oo aan jeclayn inuu buuq ku kaco buuggeyga.
Xaqiiqdii, markay dadyowgu iga xumaadaan waxaan isku dayaa inaan ka baxo jidkeyga si aan isugu dayo inaan saaxiibo u tago. Waan diidi karnaa oo wali saaxiibbo nahay. Xaqiiqdii, waan ku raacsanahay asxaabteyda inta badan dadka badankood! Kaliya weydii!
Taasi waxay tiri, barta balooggu waa xuduud duurjoog ah. Ma yeelayno, mana yeelan doonno waligeen Xeerka Anshaxa. Annaguna sidaas ma nihin! Waxaan gabi ahaanba aaminsanahay xoriyada hadalka ee internetka.
Aniguba waxaan aaminsanahay khilaaf. Waxaan nahay Sheriffyaal u gaar ah Duurjoogta Duurjoogta ah mana ahan inaan waligeen istaagno oo aan daawano sida qorayaasha kale u hanjabaan, been u sheegaan, ama xitaa si fudud u siiyaan talo xun. IMHO, awooddaada sare, inkasta oo Google or Technorati, mas'uuliyadda badan ee kaa saaran inaad hubiso inaad soo bandhigto xaqiiqooyinka sida xaqiiqda iyo fikradaha sida fikradaha.
Daacad baan ahay markaan sheego inaan doonayo inaad igula kacdo hawl qoraaladayda. Gabi ahaanba waan ku xushmeynayaa inaad igu xujeysay. Kaliya ogow in ka dib markay siigadu degto, weli waan kugu raaci karaa. Waa caadi in laba qof ay ku kala aragti duwanaadaan isku xaalad. Ma wadaagno aragti isku mid ah, sidaa darteed waligeen iskumaba arki doonno wax isku mid ah.
Ha inkaar oo ubax Dahab ah
Apr 9, 2007 at 10: 33 PM
Jason ma kuu sheegay? Aaway taasi Kahor ama kadib markii aad ugu magacawday qoraalkiisa "jahawareer jaahil ah?" Miyaad u maleyneysaa inaad ku wareegi karto dadka oo ugu yeerayo "jaahil" oo aad gacmaha ka dhaqi karto? Waxaad tuurtay feer shakhsi ah.
Apr 9, 2007 at 10: 44 PM
Maya Michael, anigu gacmahayga kama dhaqmayo. Taasi waa sababta aan mar kale wax uga qoray. Laakiin dib ugama noqonin isticmaalka erayga jaahil, in kastoo. Dhamaan qeexitaanka saxda ah ee ereyga, taasi waa sida saxda ahayd boostada. Haddii qof uun jeclaan lahaa inuu soo bandhigo caddayn taas liddi ku ah, xaqiiqdii waan u furnahay. Waan hubaa inaan caddayn u noqon doonin, in kastoo. Sidaa awgeed ereyga 'jaahil'
Apr 9, 2007 at 10: 43 PM
Sideed ugu yeedhi kartaa qof jaahil ah ka dibna ku gabanaya astaanta ah inaad tahay 'nin fiican'? Oo weliba waxaad ka cabanaysaa iyagoo difaacaya ra'yigooda inay kuu sheegayeen?
Apr 9, 2007 at 10: 50 PM
Waa kuma qofka aan ugu yeedhay jaahil? Ereyga saxda ah wuxuu ahaa, "Dhowr maalmood ka hor, balooggoodu wuxuu soo saaray jajab kale oo jaahil ah:". Waxaan iska cad inaanan waxba ka qarsoonayn, SH. Anigu ma ihi faallooga qarsoon ee baloog isticmaalaya xarfaha magacayga. Bloggeyga iyo aqoonsigeygu waa furan yihiin.
Haddii qoraalka uusan jaahil ahayn, SvN waxay heshay fursad kasta oo ay ku taageerto dalabkooda xaqiiqooyin dheeri ah oo dheeri ah. Miyay sameeyeen Maya ma awoodaan? Maya. Sidaa darteed, jaahilku wuxuu ahaa eray sax ah.
Apr 10, 2007 at 12: 20 PM
Douglas, markaad qof ugu yeerto qoraalkiisa jaahil waxaad ugu yeeraysaa jaahil. Aragtida ayaa ah in qoraaga boostada uu yahay jaahil, iyadoon loo eegin haddii aad ku dhahdo ereyo badan. Dadku wax bay qoraan, qoristu ma qorto Qoristu isma qori karto.
Iyo sidee adeegsiga xarfaha hore iga dhigayaa faallo faallooyin aan la aqoon? Waxaad heshay cinwaankayga emailka, waa ansax oo waxaa kujira magacayga oo buuxa. Markaan bilaabayo waraaqaha guri cusub, miyaan si qarsoodi ah u sameynayaa?
Dooro ereyadaada waxyar si xikmad leh, Douglas. Bayaankaaga bustaha ah ayaa reek u ah, hagaag, jahli.
Apr 10, 2007 at 12: 53 PM
Mahadsanid, SH. Way iska cadahay inaan gebi ahaanba ku raacsanayn isticmaalka ereyga jaahil. Taasi waa hagaagsan tahay, waan ku qanacsanahay inaad waqtiga aad qaadatay. Waxaan aad uga jeclaan lahaa inaad booqdayaal waqti dheer ahaateen oo aad i baran lahaydeen… laakiin waxaan u malaynayaa inaadan ka farxin karin qof walba markasta.